Aza mitady trano intsony, fa manana an'io daholo ny trano. Tapitra ny fikarohana nataonao momba ny fananana 5 Marla izao! Mandehana amin'ny lisitra manaitra anay izao. Tsy mila milaza aminao izahay fa na inona na inona miorina amin'ny G-11 dia hanao fampiasam-bola maharitra. Ary miaraka amin'ny sarany 31.000 Rs mety, mpiambina ity safidy fananana ity. Ity ny trano tonga lafatra azonao jerena ao amin'ny G-11. Ity trano fanofana ity dia mety amin'ny fianakaviana rehetra. Raha te hahalala bebe kokoa amin'ny tolotra dia mifandraisa aminay.